Iinkqubo zeOfisi eyiNtloko, ekwabizwa ngokuba ziiNkqubo eziManyeneyo zeKomkhulu
Inkqubo yeOfisi eyiyo
Iofisi ebonakalayo yinkonzo ebonelela ngedilesi yokuthumela kunye neenkonzo zokwamkela iifowuni. Inkampani esebenzisa i inkonzo ayihlali eofisini ngokwasemzimbeni. Ngokwesiqhelo iinkampani ezininzi zisebenzisa idilesi yeofisi. Ngenxa yoko, le nkonzo ibonelela ngolondolozo olubalulekileyo ngaphezulu kweofisi yemveli kunye neendleko zokwamkela. Ukongeza, abantu abaninzi basebenzisa le seti yemfihlo yezemali. Oko kukuthi, kunjalo, ii-asethi ezigcinwe kwiqumrhu okanye kwi-LLC azibophelelwanga kwidilesi yomnini, igosa okanye umlawuli.
Inkqubo yeOfisi eyiyo ifumaneka kuzo zonke i-50 US States kwaye amazwe amaninzi aphesheya.
Amagosa atyunjiweyo kunye nabaLawuli
Inkonzo yabucala yabucala yindawo apho omnye wabanxibelelanisi bethu avela khona kwiirekhodi zoluntu njengamagosa kunye nabalawuli bequmrhu lakho okanye umphathi we-LLC yakho. Ulawulo oluphambili ngokubamba onke amalungelo okuvota, ungumnini wenkampani. Ngokukhethekileyo, unamaxwebhu asezandleni zakho abonisa ukuba inkampani yeyakho. Nangona, umntu othile ekhangela kwinkampani yakho okanye igama lakho kwiirekhodi zikawonke-wonke, ababoni ubudlelwane phakathi kwakho nenkampani yakho. Ke, unokuba neakhawunti enkulu yebhanki okanye ibroker egameni lakho lenkampani. Amehlo ahlabayo akasayi kuyifumana ngokulula.
Ukongeza, inokuba yeyakho kunye nomhlaba wokuthengisa izindlu nomhlaba. Ke, libona ntoni igqwetha eliphethe umrhumo wolwaphulo-mthetho xa liphendla iimpahla zakho? Akukho nto nje. Ngaba unayo imali eyaneleyo kunye nezinye ii-asethi ezichaziweyo ukuze zikwenze ukuba ubonakale uxabisekile? Ngokunokwenzeka akunjalo, ukuba unempahla yakho kwi izixhobo ezifanelekileyo zomthetho.
IziBonelelo eziBonakalayo zeOfisi
Zininzi izibonelelo ozalwa nazo xa dibanisa okanye wenze i-LLC. Oku kunjalo ngakumbi xa usenza i-Nevada okanye I-Wyoming LLC ene-akhawunti yebhanki. Kungenxa yokuba imithetho yokukhuselwa kweeasethi kula magunya mabini idlula kwamanye amazwe. Kukho nezibonelelo ezikhulu zokukhusela iiasethi kwimimandla engaselunxwemeni, efana naleyo yeNevis LLC. Ngaphezulu kwayo yonke le nto, sebenzisa amathuba kwimithetho ekhusela abanini zabelo, amagosa nabalawuli. I-Nevada kunye neWyoming yeyona nto inamandla e-US. Ngaphezu koko, akukho rhafu yengeniso kurhulumente kwezi meko. INevis yeyona yomeleleyo emhlabeni. Ngokufanayo, akukho rhafu yengeniso kule ndawo ithandwayo. Ngoku, abantu base-US bahlawuliswa irhafu kwingeniso yehlabathi, ke oko kuthetha ukuba akukho zifom zerhafu zongezelelweyo zokufaka kwifayile.
Uninzi lwabantu basebenzisa i-Nevada, Wyoming okanye iinkampani ezingaselunxwemeni ngenxa yezi zizathu ziphambili:
· Kukuqhuba ishishini kwindawo abahlala kuyo, okanye,
Ukukhusela iiasethi zakho zobuqu kunye nokwandisa imfihlo kunye nokugcinwa kwemfihlo
Zombini ezi zizathu zingangqina ziyinzuzo enkulu kwishishini lakho. Kodwa akhona amanyathelo onokuwathatha ukuqinisekisa ukuba uyazibona izibonelelo ozilindeleyo. Kwaye, ungazongeza ezi zibonelelo ukongeza iinkonzo zokutyumba ukongeza ubumfihlo bakho njengoko sele sithethe ngasentla.
I-Nevada okanye i-Wyoming Corporation kwiKhaya lakho laseKhaya
Iqumrhu elenziwe nakweyiphi na i-50 ithi inokuqhuba ishishini kuwo onke amazwe. Umzekelo, masithi uhlala eCalifornia kwaye unayo inkampani yeelori. Ufuna ukunciphisa ityala lakho lerhafu kwaye unike ukhuseleko ngakumbi kwiiasethi zakho. Ke, wenza i-Nevada Corporation yenkampani yakho yeeloli, emva koko ubhalise eCalifornia njengequmrhu langaphandle. Oku kwaziwa njenge "isiqinisekiso selinye ilizwe." Urhulumente wase California ubhatala nayiphi na ingeniso evela kurhulumente.
Nangona kunjalo, iqumrhu lakho lisenokunandipha ukungabhatalelwa rhafu kwi-Nevada kuyo nayiphi na ingeniso evela kweli lizwe. Oku kuya kulo naliphi na elinye ilizwe apho ebesebenza khona elinemithetho engekho rhafu kurhulumente, okanye kungekho “mvume yangaphandle”. Ukuze unandiphe ezi zibonelelo zerhafu, nangona kunjalo, kuya kuba lishishini “lokuhlala”. Iimfuneko ezichazwe apha ngezantsi ziya kumisela oku.
Yongeza ubumfihlo kunye nokukhusela iiasethi
I-Nevada Corporations inikezela ubumfihlo obungenakuthelekiswa nanto kunye nokukhuseleka okuxabisekileyo kwabalawuli, amagosa, kunye nabanini be stockholders (abanini). Ngommiselo, akukho bungqina bokubambisa, okanye amagosa / abalawuli abanakubekwa tyala kulo naliphi na ityala okanye amatyala angenwe ngumbutho weNevada. Kwaye amagama e-stockholder angumbandela werekhodi yoluntu. NgabaLawuli kuphela kunye neeArhente ezibhalisiweyo ziyinto egciniweyo yoluntu. Umntu unokuzihlela ngasese ezi zikhundla. Ngokusebenzisa ixesha lokutyumba abatyunjiweyo, umzekelo, umntu unokuphucula ukhuselo kunye nemfihlo yabanini bokwenene benyani. Usebenzisa inkonzo yethu yeNtloko yomntu othembekileyo, unokuqinisekiswa ukuba igama lakho liya kugcinwa liyimfihlo emehlweni abantu abaqhelekileyo abathandayo.
Umzekelo, ungabhatala enye yeshishini lakho kunye nenzuzo yotyalo mali ngqo kwi-Nevada Corporation yakho. Oku kungandisa ubumfihlo nokukhusela iiasethi. Umntu unokukwenza oku ngokuseka i-Arhente kwilizwe lakho, emva koko enye i-Arhente eNevada. Inkampani yeNevada, nayo, ingasetyenziselwa ukutshintshana kunye nokufumana ingeniso kwiQumrhu lakho laseburhulumenteni. Ke, ishishini olisebenzayo kurhulumente wengingqi yakho unokuqesha ishishini lakho eNevada. Oku kunokuba zizinto ezifana nolawulo, ukubonisana, okanye ukuthengisa izinto zeshishini, njl.
Ukuhlangabezana neMfuneko yokuBakho koMzimba
Ngenxa yokuba uyakube uliseke ngokuchanekileyo iqumrhu lakho njenge-Arhente yokuhlala eNevada (usebenzisa iNkqubo yeOfisi ye-Nevada elula, neNkqubo ye-Nevada Virtual), kwaye ulungiselele ukutyunjwa kwamagosa atyunjiweyo ngeNkonzo yethu Yabucala ye-Nominee, iZiko lakho liya kuyifumana imali ngobunono kwaye ngemfihlo egqibeleleyo. Uya kukwazi ukuhlawula ngokwakho umvuzo kwi-Nevada Corporation. Ngenxa yokuba irhafu yomdibaniselwano ye-C Corporation incinci kakhulu kunexabiso lomntu phantse kuzo zonke iibrakethi zerhafu, unokuqonda ngakumbi ukulondolozwa kwirhafu. (Kwakhona, ukuba umbutho usebenza kurhulumente ngerhafu yengeniso yeshishini, kufuneka ulandele imithetho yerhafu yelizwe esebenza kulo. Oku akunakubandakanya izibonelelo zokuhlawulwa kwerhafu engeniso xa bekusetyenzwa kuphela eNevada. Jonga ngerhafu onayo umcebisi).
Umzekelo ongaphaya: Ukuba unemali enkulu yentengiso yemasheya, unokwenza iNkampani yeZimfanelo eziNcinci zeNevada (“LLC”) ukubamba olu tyalo-mali. Unokucwangcisela iQumrhu lakho eNevada ukuba lilawule olu tyalo-mali, kwaye uhlawule "ngeenkonzo zolawulo ezinikezelweyo" kwiqumrhu lakho eNevada kolu tyalo-mali kwi-LLC. Ngalo lonke eli xesha igama lakho aliyi kubhalisa njengokufumana konke oku, kwaye kubhatalwa irhafu, kungeniso.
Yintoni iNkqubo yeOfisi eyiyo?
Ukuze ukwazi ukuxhamla kubumfihlo obuphezulu bezezimali, uxanduva olulinganiselweyo, kunye nokukhuselwa kweeasethi ezinikezelwa yi-Nevada Corporation, kufuneka ihlangane neemfuno ezithile "zokuhlala". Kuya kufuneka ubenobungqina obaneleyo bokuba indibano yakho isemthethweni, isebenza e Nevada.
Ukwenza njalo, kufuneka kudlule ezi mvavanyo zine zilula:
Inkampani kufuneka ibe nedilesi yeshishini yeNevada, iirisithi, okanye amaxwebhu axhasayo njengobungqina.
Idinga inombolo yefowuni yaseNevada. 
Kufuneka ube nelayisensi yeshishini yeNevada
I-Arhente okanye i-LLC kufuneka i-akhawunti ye-Nevada Bank yehlobo oluthile (ukukhangela, i-akhawunti yabarhwebi, njl. Njl.).
Ukusebenza kweOfisi eyiyo
Njengoko kubonisiwe kwezi mfuno, ibhokisi elula ye-PO okanye inkonzo yokuphendula ayonelanga. Ukuze udlule kwi-muster, kufuneka kubekho iofisi yokuhlala, yokuphefumla exhasa i-Nevada Corporation yakho. Indawo esecaleni yokuvula kwaye uxhase iofisi kukuba ingabiza kakhulu, ngakumbi ukuba iNkampani eNevada sisongezelelo sesicwangciso sakho sokunciphisa irhafu kwaye ujonge ukwandisa utyalomali lwakho kwishishini lakho. Xa uvula i-ofisi, kuya kufuneka unike irente, abasebenzi, izixhobo zokusebenza, umnxeba kunye neenkonzo zedatha, irhafu yengqesho, unikezo kunye ne-inshurensi. Masizibeka ezi “xabiso leendleko zenyanga”:
Irenti yeofisi $1500
Umnxeba kunye neDatha $100
Iirhafu zengqesho $300
iyonke: $ 6000 ($ 72,000 / yr.)
Ezi ndleko zongezwa ngokukhawuleza kwirandi ye- $ 6,00 ngenyanga. Ngapha koko, oku kuqikelelwa kweendleko zokugcina, ngeendleko ezizezona ziphakamileyo kakhulu. Liphindaphinde eli nani nge-12, kwaye uyabona ukuba nokuba "isiseko sezinto ezisebenzayo" iofisi inokuhlawulela inkampani $ 72,000 ngonyaka.
Kodwa sinesisombululo esisengqiqweni sokuhlangabezana nezidingo zakho! Singayenza yonke le nto inkampani yakho iqala nje I- $ 995 ukuya kwi- $ 2,995 kunyaka wonke, kuxhomekeke kwiphakheji oyikhethileyo. NgeNkqubo yethu ye-Nevada okanye ye-Wyoming Office (ekwabizwa ngokuba yi-Nevada okanye ye-Wyoming program ye-ofisi), sinokunika umbutho wakho i-ofisi efanelekileyo kunye nedilesi yeshishini (ekhoyo ngokuqeshwa), abasebenzi abaneekhontrakthi ngexesha leeyure eziqhelekileyo zomsebenzi, umntu ophilayo uyaphendula Inombolo yakho (ekwabelwana ngayo) yesinombolo yomnxeba yeshishini, inkonzo yokuthumela ngeposi, kunye noncedo ngokuvulwa kweeakhawunti zebhanki okanye zomrhwebi. Sibonelela ngenkonzo efanayo kwiindawo ezininzi ezingaselunxwemeni.
Ibandakanywe kwiNkqubo yeOfisi yeNkampani yeNevada Corporation:
· Idilesi yesitrato yangempela yeNevada-inabasebenzi abanesivumelwano ukusuka kwi8am ukuya kwi5pm
Ixesha lePacific ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu.
· Inkonzo yokuhambisa imeyile ebhekise iimfuno zakho
Inombolo ye-Nevada ekwabelwana ngayo ephendulwa ngumntu osamkela ngokuchanekileyo
Inombolo yefeksi yeNevada
· Nceda uvule i-akhawunti yebhanki yeNevada ukuba uyafuna
· Uncedo lokufaka isicelo sephepha-mvume lokushishina ngeNevada
Abasebenzi bekhontrakthi ephilayo ukubabulisa abafowunayo ngexesha lomsebenzi.
· Inkonzo yoonobhala
Iinkampani ezihlanganisiweyo zeNevada yeVenkile yeNkqubo yeOfficial ziya kukubiza nge- $ 110 kuphela ngenyanga ukuba uhlawula ngenyanga-to-ngenyanga ngokuzinikela konyaka omnye, kodwa kwakhona, ungasebenzisa isaphulelo sethu se- $ 325 yokuhlawula kwangaphambili konyaka. Uhlawula kuphela i- $ 995 ngonyaka wonke wenkonzo.
Ukonga ngaphezulu kweOfisi yesiqhelo
Ezi phakheji zinokusindisa amawaka eedola kwiinkcitho zokusebenza, ngelixa ugcina zonke izinto ozifumana nzima, kunye nezifezekisiweyo, ukuncitshiswa kwerhafu.
INkqubo yeOfisi yethu yeNethiwekhi idibana kwaye yanelise yonke imigangatho eyimfuneko ekumiselweni kombutho wabahlali baseNevada. Kwaye ke, ezi nkonzo zinikezelwa ngendlela eyaziwayo, enobungcali. Abasebenzi abanamava abanikezela ngezi ntlobo zeenkonzo ngaphezulu kweminyaka eyi-30 baphatha imicimbi yakho. Ke, sinokunikezela le nkqubo ngexabiso elinjalo lokuheha ngenxa yomthamo omkhulu weshishini kunye nombutho ofanelekileyo.
Inani elikweli phepha okanye le fomu inikezwe ngasentla lingasetyenziselwa ukufumana ulwazi olongezelelekileyo lwe-TAX SAVINGS kunye nokukhethwa kwe-PRIVACY ekhoyo kunye neNkqubo yeOfisi yakho yeNkampani.
Isiqinisekiso sokuma okuhle
Ungaya njani kuLuntu jikelele - i-IPO, i-Reger Merger, kunye neeShells zoLuntu
Abalawuli abonyuliweyo kunye namaGosa
Inkonzo yeArhente ebhalisiweyo
Yintoni i-IRA eQokelelweyo?
Iindawo zokusebenzela zokuNcitshiswa kweRhafu
Cela iFree Info
Ziziphi iinkonzo onomdla kuzo?
Ukukhusela iAset kusuka kwi-Lawsuits Inguqu yeNkampani engaselunxwemeni Uqeqesho lweNkampani yase-US Kwi-Offshore Banking UkuThuthwa kweTrust Ukulungiswa kweRhafu omnye
Ulwazi lwakho luhlala luyimfihlo umthetho wabucala